Maxaa kasoo baxay kulankii Kim iyo Trump? – XOGMAAL.COM
By MN USA	 Last updated Jun 12, 2018
Maxaa kasoo baxay shirkii Jara’id ee uu maanta qabtay Griezmann?
Sawirro:-Farmaajo yaa ku matalay Shirka Madaxda Jaamacadda Carabta?.
Digniin! waxaa ku jira Sawirro naxdin leh Meydad lagu arkay Muqdisho
Weerar ayaa lagu dilay Qaramada Midoobay Ciidamada ka jooga Mali.
Cabdimaalik Coldoon iyo Wariyeyaal kale ayaa dib u helay xoriyadooda
Sawirro:-Farmaajo yaa ku matalay Shirka Madaxda Jaamacadda…
Digniin! waxaa ku jira Sawirro naxdin leh Meydad lagu arkay…
Weerar ayaa lagu dilay Qaramada Midoobay Ciidamada ka jooga…
Cabdimaalik Coldoon iyo Wariyeyaal kale ayaa dib u helay…